Anaovan’ny Iraniana Mpiserasera Ara-Kiafina ny Governemanta Amin’ny Sivana Ataony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2014 17:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, عربي, বাংলা, English
Sary avy amin'i Frederic Jacobs, nahazoan-dalana.
Fitaovana manafina anarana antserasera malaza ampiasain'ireo Iraniana marobe mba handoahana ny sivana Aterineto ny Tor izay nakatona hatramin'ny faramparan'ny volana Jolay hatramin'ny voalohan'ny volana Aogositra. Nahasakana ny 75 isan-jaton'ireo mpiserasera isan'andro tombanana eo amin'ny 40 000 ao amin'ny tambajotra ao Iran tsy hiditra avy amin'ny Tor izany fanakatonana izany.
Nanomboka natahorana manokana ny amin'ny Tor hatramin'izy nampiasan'ireo mpikatroka, mpanao fihetsiketsehana sy olo-tsotra mpanoratra gazety marobe nandritra ny Hetsika Maitso 2009. Rindrambaiko io ahafahan'ny mpiserasera mipaka any amin'ny habaka kinendry ka manavatsava lohamilina mpanelanelana maro, lalana manafina ny mombamomba ireo mpiserasera tsy ho fantatra intsony ho an'ireo mpamatsy tolotra aterineto, ary ahafahan'izy ireo mandoaka ny sivana apetraky ny governemanta. Rindrambaiko misokatra ny Tor ary manana mpiserasera sy developera marobe miasa mamantatra sy manaisotra marefo sy lesoka ara-piarovana, miaraka amin'ny sivana ataon'ny governemanta.
Nitatitra ny Tor tamin'ny 30 Jolay fa tsy afaka miditra ao amin'ny serasera Tor mahazatra ao Iran intsony ireo mpiserasera. Nampiseho ny fihenan'ny isan'ireo mpiserasera mifandray amin'ny tolotra isan'andro ihany koa ny mari-pandrefesana Tor .
Tamin'ny mailaka nalefa hoan'ny Global Voices, nanazava ny tale mpitantana ny Tetikasa Tor, Andrew Lewman tamin'ny 4 Aogositra fa “nanakenda” na nampiadana araka izay tratra ny fisosan'ny tambajotra miendrika fanafenatsoratra ny manampahefana. “Manakenda izay arofenitra miendrika fanafenatsoratra na SSL i Iran”, hoy izy. Tafiditra amin'izany ny Tor mahazatra, saingy mandeha tsara ny mpitatitra (“pluggable” na) azo atsofoka .
Hitan'i Lewman ny fanamby atrehin'ny mpiseraseran'ny Tor sy ireo fitaovana manafina anarana hafa: Raha tsy afaka mamaha ireo zotram-pifandraisana manafina hafatra antserasera ny governemanta amin'ny ankapobeny, dia afaka manavaka mora foana ny zotram-pifandraisana manafina anarana na hafatra. Ary raha sitrak'izy ireo, dia afaka manakana izany izy ireo – izany no nataon'ny governemanta Iraniana herinandro vitsy lasa izay.
Ny vahaolana hitan'i Lewman dia ny “mpitatitra azo atsofoka”, karazana zotram-pifandraisana Tor izay mifandray amin'ny tambajotra mampiasa lalana miafina fantatra amin'ny hoe tetezana. Mahatonga izany ho sarotra kokoa hoan'ny governemanta ny mahita ny fifandraisana, ary noho izany sarotra kokoa ny manakana izany.
Tamina antsafa niarahana tamin'ny Global Voices, mpikaroka momba ny fiarovana Aterineto, Frederic Jacobs nanazava hoe: «Mino aho fa zavatra tsara ny nanakatonan'izy ireo fotoana fohy ny [Tor] tao anatin'ny fotoana tsy saropady hoan'ireo mpikatroka.” Nanazava i Jacobs fa lesona tsara hoan'ireo mpiserasera Iraniana izany mba hampiasana tetezamaro, izay tena sarotra hoan'ny mpanivana ny manakana azy. Nahazo mpiserasera vaovao 3000 ny Tor, izay mampiasa tetezana ivelan'ny fifandraisana Tor mahazatra avokoa izy rehetra, hatramin'ny nisian'ny fanakanana tamin'ny faran'ny volana Jolay.
Hoy i Jacobs nanazava hoe : “Ny lakileny na dia ampiasaina amin'ny fanafenana anarana aza ny Tor, tsy manafina izany fa mampiasa Tor ianao raha tsy mampiasa mpitatitra azo atsofoka.”
Hita amin'ny mari-pandrefesana Tor ihany koa ny fisongadinan'ny fitomboan'isan'ireo Iraniana mampiasa tetezamaro Tor hatramin'ny nanakatonana vonjimaika ny Tor.
Tamin'ny 5 Aogositra, nitatitra tao amin'ny pejy Twitter-ny ilay mpikaroka momba ny aterineto monina ao Londra, Nariman Gharib fa efa miverina amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny Tor.
دسترسی مستقیم به سرویس #تور رفع فیلتر شد. Direct access to #TOR Is Unblocked Again in #Iran. #Filternet pic.twitter.com/fVPSUbBFsu
Efa nisokatra indray ny fidirana mivantana ao amin'ny #TOR #Iran. #Filternet pic.twitter.com/fVPSUbBFsu
Hatramin'ny taona 2011, nalaza tamin'ny filalaovana ara-kiafina tamin'ny Tor ny governemanta Iraniana mba hanakatonana ny fifandraisana ao amin'ny firenena. Mamoaka fitsipika fanivanana vaovao isam-potoana ny governemanta hanakanana ny zotram-pifandraisana Tor, izay valian'ny fianakaviamben'ny Tor amin'ny amin'ny fanomezana ny fanafodiny mandritra iny tontolo andro iny ihany. Mbola mitohy ny lalao hatramin'izao.